PressReader - Isolezwe ngeSonto: 2017-10-15 - Owabelaphi uchaza eyokuqothwa kwemindeni
Owabelaphi uchaza eyokuqothwa kwemindeni
Isolezwe ngeSonto - 2017-10-15 - IZINDABA - KHETHA SANGWENI
IZIGAMEKO zokubulawa kwemindeni KwaZulu-Natal sekudale elikhulu itwetwe kubantu bakulesi sifundazwe, ngoba akwaziwa ukuthi kudalwa yini futhi kuzophela nini.
Balinganiselwa ku-20 abantu abahlaselwe babulawa bendawonye emakhaya abo kusuka ngoFebhruwari kuze kube ngu-Okthoba kulo nyaka.
USihlalo wabelaphi bendabuko esifundazweni uDkt Sazi Mhlongo uthe kufanele abantu bagezwe, ngoba kwaliwa kakhulu izwe lingakakhululeki. Uthe kwachitheka kakhulu igazi kwasala leyo nsila ingageziwe yingakho abantu benobulwane.
“Uhulumeni kufanele abambisane neSilo kubuyiswe amasosha afela ezintabeni atshelwe ukuthi akusaliwa manje. Kade kwasa ngiyisho le nto ngingalalelwa, uma ingalungiswa le nto sisazoba nenkinga enkulu yokufa kwabantu,” kusho UDkt Mhlongo.
Uthe uma ubheka indlela ababulali abenza ngayo kuyabonakala ukuthi abazenzi abanandaba nokuboshwa bangamelwe yiqunga nelukuluku.
Okushayisa ngovalo kakhulu ukuthi lezi zigameko zisabalele nesifundazwe sonke, nokwenza abaningi balale bemi ngezinyawo, ngoba abazi noma bayalandela yini. Lezi zigameko zalolu hlobo zazijwayele ukubonakala ngezikhathi zodlame lwezombangazwe kuleli. Kuyichilo ukubona kubuya lo mkhuba nakuba sesineminyaka eminingi ngaphansi kombuso wentando yabantu.
Lokhu kubulawa kwemindeni kulandelana sekuyinsakavukela umchilo wesidwaba futhi akungabazeki ukuthi kuyasithunaza isifundazwe kulabo abasibukayo nabangase befise ukusihambela. Kusibeka njengendawo enabantu abanobulwane njengoba laba babulali beqotha imbokodo nesisekelo, beqotha ngisho ingane yebele engazi nokuthi lidumephi. Lokhu kukhomba ngokusobala ukuthi kunenqwaba yezibhamu eziyingozi ezingekho emthethweni ezisezandleni ezingafanele kulesi sifundazwe. NgoFebhuwari walo nyaka kushaqeke abaningi ngesikhathi kuqothwa amalungu omndeni wakwaMzila eMlaza,eThekwini. Lama lungu omndeni amane angenelwa amadoda abadubula aze adlwengula elinye ilungu lomndeni ngaphambi kokulibulala. Ngo-Agasti kuzwakale esinye isigameko esinyantisa igazi lapho kudutshulwe kwabulawa amalungu amahlanu omndeni wakwaNtshangase, eMbongolwane, eShowe. Kulesi sigameko kwasala amanye amalungu omndeni elimele kabi njengoba aphunyuka kushiswa nezindlu.
Ngasekuqaleni kwale nyanga kubulawe amalungu omndeni angu-8 akwakwaSibiya eMatimatolo,eGreyotown. Nakulesi sigameko bakhona abasinde ngokulambisa ngesikhathi kuqhuma inganono. Kubulawe abesizane abadala ababili namantombazane ayisithupha.
Kungakapholi maseko ngesonto eledlule eNteke, eMariannhill, kuhlaselwe kwabulawa amalungu amahlanu omndeni wakwaGwala. Ezinsukwini ezimbalwa ezedlule kudutshulwe kwabulawa amalungu omndeni amathathu eFolweni esemgwaqeni uM35.
Zonke lezi zigameko sezenze amaphoyisa kulesi sifundazwe afingqa imikhono asebenza ubusuku nemini ukuqinisekisa ukuthi abhekana ngqo nabenzi bobubi.
Okhulumela amaphoyisa kwaZulu-Natal uLieutenant Colonel Thulani Zwane, uthe kuningi okwenziwa amaphoyisa ekulweni nalezi zigameko.
Uthe kunophiko lwamaphoyisa oluphenya ubugebengu obuhleliwe olunkanise esifundazweni, lusebenza lolu daba lokubulawa kwabantu.
‘’Lo mkhankaso wamaphoyisa uqalile ukuthela izithelo njengoba kukhona umsolwa oboshiwe maqondana nokubulawa kwabantu eNteke. Uvelile enkantolo kaMantshi yasePinetown wabuyiselwa esitokisini, uyoze abuye enkantolo ngo-Okhthoba 16 (kusasa),’’ kusho uZwane.
UZwane uthe akugcini lapho njengoba amaphoyisa ngenyanga edlule aqoqe izibhamu ezingu-213 ezingekho emthethweni nezinhlamvu, kwaboshwa abasolwa abangu-227.
Uphinde waveza ukuthi kunabasolwa abalahlwe amacala bathola izigwebo ezinzima odilikajele. Ucele amalungu omphakathi ukuthi angasongi izandla ekubeni izigebengu zicanasa kodwa abambisane namaphoyisa ngokuwaluma indlebe uma kukhona akuzwayo okuthinta ubugebengu.
Imizamo yokuthola ukuphawula koMnyango wezokuPhepha nokuXhunyaniswa koMphakathi KwaZulu Natal, ayiphumelelanga njengoba ababhekele ezokuxhumana kuwona bebengaziphenduli izingcingo. Abayiphendulanga nemiyalezo abathunyelelwe yona.
KWAKUYISIKHATHI sobunzima emndeni wakwaMzila eMlaza ngesikhathi kubulewe amalungu awo
Izithombe: GCINA NDWALANE
BASALA bedangele abomndeni wakwaGwala eNteke, eMariannhill, emuva kokuqothwa kwamalungu omndeni ngenhlamvu